Nizeria: Inona no Nolazain’ny Bilaogera Nizeriana Momba ny Fifidianana 2011? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2011 8:06 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, polski, Swahili, English
Nanomboka ny taona vaovao tamin'ny fitsikerana ny fanapoahana baomba izay mandefa ny Nizeriana ho any amin'ny razany mialoha i Nze Sylva Ifedigbo . Mampahonena tokoa fa mbola miseho foana ny herisetra rehefa miditra ny resaka politika ao Nizeria:
Navelatr'i Felix Okoli teo an-databatry ny Vaomieram-pirenena tsy miankina misahana ny fifidianana ary indrindra teo amin'ny lehibeny Attahiru Jega ny olana (antsipiriany?):
Fitsapana farany ahafaha-mitsara ny tsy fahaiza-mikarakara fifidianana azo inoana ataon'ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana ny fisoratan'ny mpifidy anarana . Nanamarina izany ny Nigerian Curiosity :
Resaka fahamaroana ny Fifidianana. Nahatonga ny saina ny maro ny firoboroboan'ny valan-tserasera raha itodihana ny revolisiona tao Afrika Avaratra. Tsy mahagaga raha narahina tamim-pahafinaretana lehibe ny Fifidianana savaranonando. Nanoratra ity i Nnenna:
Nihevitra i Feathers Project fa miavaka ny Fifidianana taona 2011 noho ny hamaroan'ireo mpanara-maso ny Fifidianana tsy miankina eto an-toerana.
Gbenga Sessan nanamarina ny tanjaky ny media sosialy tamin'ny Fifidianana izay nahitana fandrosoana tamin'ny fampiharana vaovao ny – ReVoDa izay:
Nanana soso-kevitra ho an'ny Vadin'ny Filoham-pirenena i Eurukanaija, izay miteny anglisy sarintsariny toa zary reharehan'ny firenena:
Tsy hoe ny bilaogera ihany no miresaka fa mba mihira koa ny mpanao mozika. Ny fampielezan-kevitra manentana ny olom-pirenena tamin'ny Fifidianana dia efa tonga sahady tao amin'ny aterineto ka nahafahana naneho hevitra. Trading Places nilaza izany toy izao:
Tamin'ny Twitter, Eldeethedon, iray amin'ireo mpanao mozika maromaro, dia namporisika ny vahoaka mba “mba ho antoky ny fanovana” ary hiarovana ny safidin'ny olona.